बिधवा ! नाम नै मन परेन दिलिपलाई । – Namaste Filmy
बिधवा ! नाम नै मन परेन दिलिपलाई ।
फिल्म ‘बिधवा’ आँउदो शुक्रबारबाट रिलिज हुदैछ । फिल्मको मुख्य हिरो दिलिप रायमाझी हुन । तर आइतबार राजधानीमा आयोजित प्रेस मीटमा दिलिप सहभागी भएनन ।
उनी प्रेस मीटमा नआउनुको कारण गज्जबकै रहेछ । बुझिए अनुसार फिल्मको नाम बिधुवा दिलिपलाई कतिपनि मन नपरेको रहेछ । तसर्थ फिल्मको नाम परिवर्तन नगरेसम्म कुनैपनि पब्लिसिटीमा उनी सहभागी हुने छैनन । यसको खुलासा निर्देशक मनोज श्रेष्ठले गरेका हुन ।
मनोजका अनुसार अहिलेको जामानामा यस्तो नाम राख्न नहुने भन्दै बरु कुनै अंग्रेजी नाम राख्न दिलिपको सुझाव थियो । तर मनोजले नाम परिवर्तन गर्न मान्दै मानेनन् । त्यसपछि त के चाहियो, फिल्मकै हिरोले गरिदिए पब्लिसिटी बहिष्कार ।
अब फिल्म खेलेकै कलाकारलाई मन नपरेको फिल्मको नाम दर्शकलाई मन पर्लान त ? जे होस बिशुद्ध सामजिक कथा र नारीको दुर्दशा चित्रण गरिएको फिल्म एकपटक हेर्नुपर्ने निर्माता गिरी प्रसाद सुनार बताउछन । फिल्ममा दिलिप रायमाझीसँगै सोनु घिमिरे, मनोज श्रेष्ठ, बिद्या कार्की लगायतको अभिनय रहेको छ ।
भुवन केसी र शान्ति प्रियले गरे "इच्छा" को पोष्टर तथा अडियो सार्वजनिक
अमिताभले भने- मलाई टिबी भएको थियो !